DAAWO VIDEO:Turkiga oo Kaga Farxiyey Somaliya Balan Qaaday Sucuudiga Looga Soo Shaqo Doonan Doono – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Turkiga oo Kaga Farxiyey Somaliya Balan Qaaday Sucuudiga Looga Soo Shaqo Doonan Doono
January 20, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Maanta 2
Isaga oo weriyayaasha la hadlayey xilli uu kasoo laabanayey shir madaxeedka arrimaha Libya ee ka dhacay Berlin, ayaa Erdogan waxa uu sheegay in Turkey ay qaadi doonto tallaabooyin waafaqsan casuumadda Soomaaliya, hase yeeshee ma bixin faah-faahin dheeraad ah
DAAWO:- Faaduma Faandhe “Waxaan rabnaa Galmudug la iska wada dhex arki doono waana sababta aan udhaaranay”.
DAAWO VIDEO:Fannaan dowladda u shaqeeya oo qirtay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab
Haddii aan anigu la talin karo madaxda Dawladda Federaalka waxaan u bidhaamin lahaa fursadaha qaalisan ee uu dalku si la yaab leh uga faa’iideysan lahaa haddii ay tallaabooyinkan qaadaan:
1. In ay Shilin Soomaaliga ku saleeyaan Liiraha Turkiga oo Bangiyada iyo xawaaladaha lagu laazimo in ay Liiraha ka yeelaan keydkooda guud ee sarifka u qaabilsan.
2. In ay dakhliga qaran iyo deeqaha ba ku guddoomaan oo kuna keydsadaan Liiraha Turkiga inta ay Doolarka ka wareegaan oo shirkadaha iyo ganacsiyada ku khasbaan in ay Liiraha dunida kaga ganacsadaan.
Tallaabooyinkaasu saameyn weyn ayay ku yeelan lahaayeen oo wax weyn ka beddeli lahaayeen dhaqaalaha dalka iyo guud ahaan ba hantida qaran. Waxaa faa’iidooyinka ka mid ahaan lahaa in ay shirkadaha caalamiga ee Soomaaliya maalgashigeeda mise la ganacsigeeda aad u xiiseynaya ee aan Shilin Soomaaliga ka cabsi qaba ay daad sidiisa ugu soo rogmaan dalka gebi ahaantiisa maadaama ay kalsooni buuxda ka yeelanayaan Liiraha Turkiga ee hantida qaran lagu saleeyay.
Ilooyin dhaqaale ee aan la tirin karin baa runtii ganacsiyada dalka u dillaaci lahaa oo dakhliga iyo miisaaniyadda qaran cirka ku shareeri lahaa. Xataa waxaa dhici lahayd in waxsoosaarka laf dhabarka u ah dhaqaalaha dalka uu xoog u kobci lahaa oo warshado waaweyn oo badani dalka ka hirgali lahaayeen.
Inta ay dhexdooda isku foogganaayeen bay talooyinkii tayada lahaa wada seegeen. Allaah Kariim!
Qaar baa dhihi doona oo ninku miyuu waalan yahay soow doolarku ma aha lacagta ay sarifyada caalamigu salka ku hayaan maxuu Soomaaliya ugu diddan yahay?
Jawaabtu waa mid aad u sahlan. Doolaarku Soomaaliya u ma aha lacag qaran iyo hanti qaran toona. Dadka iyo shirkadaha heerka caalamiga wax ku maalgashada isku ma halleyn karaan Shilin Soomaaliga iyo doolarka Soomaaliya suuqeeda dhaqaale ka shaqeeya midna waayo haddii uu shaki mise dhabaq dalka hadheeyo doolarka ayaa ba dalka ka hayaamaya oo musuq maasuq baahsani ku habsanayaa.
Haddii se Liiraha Turkigu uu sarifka iyo keydka Soomaaliya u noqdo lacagta rasmiga ah waxay kafaala qaad u noqonaysaa shirkadaha iyo dadka maalgashiga sameynaya sababta oo ah Turkiya ma aqbalayso in lacagteeda laga musuq maasuqo oo sarifkiisu mid sugan ayuu sii ahaanayaa. Maadaama ay Turkidu dusha ka maareynayso waa lacag iyo hanti weli milkigooda ku jira ee aan lala baxsan karin. Kuwa maalgashaday na hantidooda meel ay oogu hagaagaan bay leeyihiin oo waa Ankara. Doolarku tayadaas ma leh.